ပေါက်ကွဲစေနိုင်သောအသံနှင့်အချက်ပေးအချက်ပေးကိရိယာများ၏အသုံးချမှုအကွာအဝေးသည်ပိုမိုကျယ်ပြန့်လာသည်။ ဒီအခြေအနေကိုဘာကဖြစ်စေတာလဲ။ လေ့လာကြည့်ရအောင်။ ယနေ့ခေတ်တွင်ဓာတုပတ်ဝန်းကျင်သည်ပိုမိုရှုပ်ထွေး။ ပြောင်းလဲလာသည်နှင့်အမျှအကဲဖြတ်မှု၏အသုံးချမှုနှင့်အကဲဖြတ်နှုန်း
သံမဏိပေါက်ကွဲစေသောအကာအကွယ်ဖြန့်ဖြူးရေးသေတ္တာပေါက်ကွဲမှုကိုကာကွယ်သည့်သေတ္တာများကိုယခုအခါတွင်တွင်ကျယ်ကျယ်အသုံးပြုလာကြပြီးလူတိုင်းသည်စံသတ်မှတ်ထားသောသေတ္တာများကို ၀ ယ်ယူလေ့ရှိကြသည်၊ သို့သော်အမှန်မှာသေတ္တာများကိုသင်၏အခြေအနေနှင့်အညီပြုပြင်ရန်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ နေရာအတော်များများမှာသံမဏိပေါက်ကွဲမှုကိုကာကွယ်ပေးသောသံမဏိအသုံးပြုမှု ...
Taiyi ပေါက်ကွဲမှုကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သော Series-TYMLED601 ပေါက်ကွဲမှုကိုကာကွယ်ပေးသော Lighting
Taiyi Explosion-proof Series-TYMLED601 ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သော Lighting သည် Taiyi Energy ၏ပေါက်ကွဲမှုကိုကာကွယ်ပေးသောထုတ်ကုန်များ၏ထူးခြားချက်သုံးချက်: 1. ဘေးကင်းလုံခြုံမှု 2. စွမ်းအင်ချွေတာရေးနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မှု 3. ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးချနိုင်မှု 1. အခွံကိုအလူမီနီယံအလွိုင်းဖြန်းပြီးသေဆုံးသည်။ gener တစ်ခုနဲ့ ...
ဒီနေ့ငါပေါက်ကွဲမှုကိုကာကွယ်တဲ့မီးတွေသုံးသင့်တဲ့နေရာတွေအကြောင်းမင်းကိုပြောမယ်။ မင်းသတင်းအမှန်တွေမြင်ဖူးလား။ ဥပမာအားဖြင့်ဓာတုစက်ရုံပေါက်ကွဲပြီး ၅ ဦး သေဆုံးပြီး ၁ ဦး ဒဏ်ရာရခြင်းစသဖြင့်ဤကဲ့သို့သောဖြစ်ရပ်မျိုးကိုကိစ္စအတော်များများတွင်ရှောင်ရှားနိုင်ပါသည်။ ပေါက်ကွဲမှုကိုတပ်ဆင်ရန်အရေးကြီးသည်။
21-06-30 တွင် admin မှ
“ ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်နိုင်သောအချိတ်အဆက်များ” အကြောင်းပြောသောအခါစက်မှုလုပ်ငန်းရှိလူတိုင်းသည်၎င်းနှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိသည်။ Chengdu Taiyi ကဲ့သို့ထုတ်လုပ်သူများစွာရှိသည်။ connectors, plugs စသည်ကဲ့သို့နာမည်များစွာလည်းရှိသည်။ ငါ့ကိုဘာကြောင့်ငါ့ကိုဒီလိုခေါ်တာလဲလို့မင်းမေးရင်တောင် Mas လို့သာပြောနိုင်ပါတယ်။
ကုန်ပစ္စည်းအသစ်ထောက်ခံချက် – LED ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သော High Bay Light
ထုတ်ကုန်သစ်အကြံပြုချက် – LED ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သော High Bay Light ဤကိစ္စတွင်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အသစ်ဖြစ်သော LED ပေါက်ကွဲမှုကိုကာကွယ်နိုင်သော high bay light ကိုမိတ်ဆက်ပေးလိုပါသည်။ ဤထုတ်ကုန်များကိုအန္တရာယ်ရှိသောနေရာအမျိုးမျိုးတွင်သုံးနိုင်သည်။ ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သောမီးလုံးများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင် LED ပေါက်ကွဲခြင်း ...
Taiyi Ex-proof Series-TY/PLED502 Ex-proof Platform Light ။
Taiyi ပေါက်ကွဲမှုကိုကာကွယ်သောထုတ်ကုန်များ၏ဝိသေသလက္ခဏာများမှာ-၁။ ဘေးကင်းလုံခြုံမှု၊ စွမ်းအင်ချွေတာရေး၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကာကွယ်မှုနှင့်ကျယ်ပြန့်စွာအသုံးချနိုင်မှု။ ၂။ အခွံကိုတစ်ကြိမ်သေဒဏ်ခတ်ခြင်းအားဖြင့်ခံနိုင်ရည်ရှိသောအလူမီနီယံအလွိုင်းဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ မျက်နှာပြင်ကို high-speed shot blasting နှင့် high-voltage electrostatic spray တို့ဖြင့်သန့်စင်သည်။